Uyifumana kanjani iWindows Live Messenger kwiWindows 8.1 | Iindaba zeGajethi
Ungayifumana njani kwakhona iWindows Live Messenger kwiWindows 8.1?
Ngezona zamva nje uhlaziyo olucetywayo nguMicrosoft kwiWindows 8.1 uninzi lwezinto ezindala zisuswe ngokuzenzekelayo, nangona isithembiso senkampani sizama ukwenza ezinye zazo inokufunyanwa kwiinguqulelo zazo ezilandelayo; Windows Live Messenger yinkonzo yemiyalezo ekhawulezileyo abantu abaninzi abanqwenela ukuba nayo kwakhona kwinguqulelo yamvanje kwaye ngelishwa, abaninzi banyanzelwa ukuba basebenzise i-Skype endaweni yoko.
Abo bafuna unale nkonzo yeWindows Live Messenger kwakhona Bazamile ukukhangela iwebhu ngeendlela ezahlukeneyo zokubuyisela isixhobo esichaziweyo, ukufumana isimanga esikrakra apho kusetyenziswa kuphela iinkonzo zomntu wesithathu ezifaka iilayibrari ezingafunekiyo kunye neebar zesixhobo kwi-Intanethi. into efana ncam naleyo besikhe sathetha ngayo ngaphambili; okwangoku siza kukunika isisombululo esisebenzayo (nesemthethweni) ukuze ukwazi le nkonzo yokuthumela imiyalezo ibuyele kwiWindows 8.1.
1 Uphendlo lweWindows kwiWindows Messenger
2 Uyikhuphela njani ingxelo yangoku yeWindows Live Messenger?
Uphendlo lweWindows kwiWindows Messenger
Ngenxa yesidingo senani elikhulu labantu esiye saqhuba nophando oluncinci kule nkonzo yemiyalezo kwangoko, ukuqala kwethu ukubhenela kwiinjini ezahlukeneyo zokukhangela kwaye ngokukodwa, kuGoogle.com; kanye apho sibeke njenge khangela igama eliphambili kwi "Windows Live Messenger", Ukuvela kweengcebiso ezininzi ezingenanto yakwenza nomthetho kodwa endaweni yoko, kunye nokusetyenziswa kunye neenkonzo zomntu wesithathu. Asikukhuthazi ukubamba nayiphi na kuzo, kuba zifakela ezazo izicelo kwaye emva koko zithunyelise umsebenzisi kumaphepha ewebhu angathandekiyo.
Kwakhona, musa ukukhangela ezi injini ngegama elingundoqo «Windows Live Messenger yeWindows XP », njengoko oku bekuyalele kwi-Microsoft esemthethweni ye-URL apho uya kukhuphela khona eyona nguqulelo indala yale nkonzo yokuthumela imiyalezo kwangoko. Senze okufanayo kwaye sifumene ujongano lwakudala kunye noluphelelwe lixesha, onokuthi uthandwe ngumfanekiso esiya kuthi sibeke ngezantsi kancinci.
Ewe kunjalo, kufuneka sichaze ukuba le nguqulo isebenza ngokugqibeleleyo, nangona ngezithintelo ngokulandelelana kwazo ezinokucaphukisa xa kufikwa kuncokolwa nomntu ngamnye kubafowunelwa kunye nabahlobo.
Uyikhuphela njani ingxelo yangoku yeWindows Live Messenger?
Ewe, injongo yeli nqaku kukuba unako Unenguqulelo yangoku yale sicelo sokuthumela imiyalezo. Siza kukubonelela ngendlela elula eya kuthi kamva ikukhokelele kwi-URL esemthethweni neyesemthethweni ukusuka apho unokufikelela khona Khuphela kwaye ufake iWindows Live Messenger, Zonke zisebenzisa iWindows 8.1.
Kufanelekile ukwenza ukubonakaliswa kokugqibela malunga nento esiza kuyincoma ngeli xesha, kwaye kunjalo nangona inkqubo siyincoma ngokusisiseko kwiWindows 8.1, Ungasebenzisa okufanayo nakwezinye iinguqulelo eziphambi kwayo kunye, nakwiikhompyuter ezingama-32-bit kunye nee-64-bit zeekhompyuter.
Qalisa inkqubo yakho yeWindows 8.1 kunye nentloko kwi desktop.
Vula isikhangeli sakho seintanethi (ayinamsebenzi nokuba usebenzisa yiphi).
Kwi-URL yohlobo lweGoogle.com njengenjini yokukhangela oyithandayo.
Ngenisa igama eliphambili: «Iingcebiso yeWindows»Ngaphandle kweempawu zokucaphula uze ucofe u Entrar.
Ngokuqinisekileyo uya kubona inani elikhulu leziphumo, kufuneka ukhethe (ngokubanzi) eyokuqala. Apho uyakuqaphela inkcazo encinci apho kukhankanyiwe khona sowuza kuya kwi-URL esemthethweni yale nkonzo; ukuba awufumananga iziphumo ezichanekileyo sicebisa ukuba ucofe kwikhonkco elilandelayo, eya kukuhambisa kwi-URL esemthethweni yokukhuphela.
Umfanekiso esiwubeke kwinxalenye ephezulu yileyo uya kufumana ngayo, kufuneka Cofa kwiqhosha eliluhlaza elithi "khuphela ngoku"; Emva kokugqiba ukukhuphela, kuya kufuneka usebenze ifayile yayo, eya kuthi ifake usetyenziso oluncinci kwaye phakathi kwabo, Windows Live Messenger ngaphakathi kwale Windows 8.1 yokusebenza.
Nje ukuba ufake iziqinisekiso (igama lomsebenzisi okanye i-imeyile kunye negama lokugqitha), uya kuba nakho ukonwabela zonke izibonelelo ezihlala zinikezelwa yiWindows Live Messenger; Ngoku kungakho umzuzu othile apho isicelo sicebisa ukuba wenze uhlaziyo, Kuyafana ukuba UNGAYAMKELI kuba ngenxa yoku, ubuya kwenza ukuba iSkype iqale ukusebenza ngendlela ethile kwikhompyuter yakho ngeWindows 8.1.
Sicebisa ukuba uye kule khonkco ilandelayo, apho siza kuphakamisa ulwazi olubalulekileyo ngendlela onokugcina ngayo le nguqulo yeWindows Live Messenger ngaphandle kokuyihlaziya njengoko kucetyisiwe nguMicrosoft. Kufuneka ngqo yiya kule khonkco ilandelayo ukufumana isiziba unqwenelekayo kwaye kufuneka uyiphumeze ngeli xesha. Ngale patch elula uya kuba nenkohliso eya kugcina inkonzo yemiyalezo kwangoko efakwe kwikhompyuter yakho ixesha elide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungayifumana njani kwakhona iWindows Live Messenger kwiWindows 8.1?
Enkosi mzalwana ngolwazi, kwaye uchanekile ndingomnye wabo baziva beqhelekile ujongano lweWLM, uThixo akusikelele. Khathalela
Ibhalbhu yePaco sitsho
Akukho ndlela yakwenza.
Phendula kuPaco bombilla
Ungazongeza njani ii-Intanethi ezimbini kwikhompyuter enye
Udlala njani iZilayidi kancinane okanye ngokukhawuleza kwiWindows